Maxay yihiin Xeeladaha Suuqgeynta Saameynta Ugu Waxtarka Badan? | Martech Zone
Maxay yihiin Xeeladaha Suuqgeynta Saameynta Ugu Waxtarka Badan?
Khamiista, Noofembar 9, 2017 Isniin, Janaayo 18, 2021 Douglas Karr
Brian Wallace ayaa la wadaagay Taariikhda, Evolution, iyo mustaqbalka Suuqgeynta Saameynta taasi waxay qabatay shaqo fantastik ah oo qeexaysa saamaynta iyo sida noocyadu ula dhaqmayaan iyaga. Aad ayaan ugahadlay sida ay magacyadu ulashaqeeyaan saamileyaasha iyo dhanka kale waxaan aaminsanahay in xogtadan laga soo qaatay Xayeysiinta MDG ay qabato shaqo aan caadi aheyn oo faahfaahinaysa sida xiriirka suuq geynta saamaynta leh uu u egyahay.
Xogta, Xaaladda Suuqgeynta Saameeyaha: Waa maxay Nooc kasta oo u Baahan Yahay inuu Ogaado, wuxuu ka hadlayaa tabaha ugu wax ku oolka badan iyo habab loo maro suuq-geynta saamaynta.
Xeeladaha Suuqgeynta Saameynta Ugu Waxtarka Badan
https://martech.zone/neverbounce-referralSafiirada socda - hadda, waxaan la leeyahay danjire socda Agorapulse. Waxay noqon kartaa mid ka mid ah cilaaqaadyadii ugu fiicnaa ee aan abid la yeesho astaan. Waxaan raad raacay xiriir Agorapulse kadib markii aan ku jahwareersanaa barnaamijyada kale ee warbaahinta bulshada markii aan wax ka qabanayay tiro badan oo ka mid ah xisaabaadka warbaahinta bulshada. Xiriiriyaha adeegsadaha wuxuu aad ugu shaqeeyaa sida liistada hawsha ama sanduuqa sanduuqa, halkaasoo kooxahaadu si fudud ugu maamuli karaan isdhexgalka dibadda. Isku darka gaaritaankeyga iyo hamiga aan u qabo wax soo saarkooda ayaa albaab ka furtay halkaas oo Emeric iyo kooxdiisu iiga qoreen barnaamijka Danjiraha. Adigoon wax cadaadis ah, iyo shaac bixin buuxda, waxaan ka hadlayaa Agorapulse markay dadku raadinayaan barxad ay ku maareeyaan barahooda bulshada.
Faallooyinka alaabada - Shure ayaa ii soo diray an MV88 makarafoonka iPhone-kayga qiyaastii sanad ka hor si aan u tijaabiyo. Filashadu waxay ahayd inaan dib-u-eegista ku wadaago khadka tooska ah ka dibna aan makarafoonka ku soo celiyo. Shure wuxuu xaqiiqsaday inay haystaan ​​wax soo saar cajiib ah waxayna doonayeen inay suuq galiyaan iyaga oo adeegsanaya duubayaasha saamaynta ku leh. Hagaag, waxaan aad ugu jeclaaday makarafoonka si qoto dheer oo aan usii wado inaan tuso qof walba… waxaanan waydiiyey Shure inaan sii haysan karo.
Xusuus-qorka Brand - Marna ha noqon waa shirkad ka caawisa ganacsiyada inay ka ilaashadaan keydkooda macluumaadka e-mayl cinwaanada dhibaatada leh ee si xun u saameyn kara awooddooda ay ku heli karaan sanduuqa sanduuqa macaamiishooda. Waxaan hayaa maqaal, Sabab, Sidee, iyo Halkee laga Xaqiijiyaa Liisaska Suuqgeynta Emailkaaga ee khadka tooska ah, taas oo si isdaba joog ah ay u akhriyaan akhristayaasha iyaga oo ujeedkoodu yahay in ay raadiyaan xalal sidan oo kale ah si aan waligood u gaadhin. Ka dib markii aan tijaabiyay barnaamijkooda iyo kuwa kale, waan ogaa inay heystaan ​​sheyga ugu fiican halkaas, sidaa darteed waxaan aqbalay dalab si aan si muuqata ugu muujiyo adeegooda boostadaas. Annaga, dabcan, sidoo kale waxaan soo bandhignaa shaac bixin buuxda.
Daboolida Dhacdada - Iyada oo la daabacayo iyo istudiyahayaga la qaadi karo, waxaa badanaa la i weydiiyaa inaan soo bandhigo dhacdooyinka iyadoo lagu beddelayo mushahar, safar, iyo kharashyada dhacdooyinka. Munaasabadda, waxaan ku daabacnaa maqaallo, waxaan duubeynaa podcasts, waxaan sameynaa kal-fadhiyo Facebook Live ah, waxaanna toos ugu soo qornaa dhacdooyinka. Xitaa waxaan u keenay shaqaale inay soo saaraan qoraallo kooban si ay ugu soo diraan guriga iyaga iyo ka qaybgalayaasha dhacdooyinka ka dib. Dhawaan, waxaan tan u sameeyay Dell World halkaas oo aan iskaashi la yeeshay Mark Schaefer barnaamijkooda iftiiminta. Dhacdo cajiib ah iyo fursad. Marka laga reebo kor u qaadista masraxa, tani waa habka aan ugu jeclahay in aan ku kulmo shir!
Mawduuc Taageero ah - In kasta oo aanan dhib ka qabin waxyaabaha la kafaala qaaday, haddana runtii waxaan iska sii jeclahay shirkadaha lala wadaago. Runtii waa inay hogaamiyeyaal ka noqdaan qaybtooda suuqa oo ay qiime u siiyaan akhristayaashayada, dhegeystayaasha, iyo kuwa raacsan. Haddii ay sumadeyda khatar galineyso, ma sameyn doono. Waxaan hoos u dhigay tan shirkado ah sanadihii la soo dhaafay sababtoo ah ma aanan u xaqiijin karin shirkadda ama wax soo saarka. Inta badan waxaad ka heli doontaa waxyaabaha la kafaala qaaday dhacdooyinka suuq-geynta ee aan wadaagno.
Suuqyayaashu waxay yiraahdaan waxyaabaha ugu wax ku oolka badan waxay ka yimaadaan aaminaad, saamayn khibrad leh. Dabcan, waan ku raacsanahay tan. Waxaan rumeysanahay in la aamini karo, saameyn wax ku ool ah ay soo qaateen sannado, laga yaabee tobanaan sano, inay ku dhistaan ​​awooddooda warshadooda. Maalgashi sidan oo kale ah, si sahal ah iskama bixin lahaayeen inay iibiyaan iibiyaha ugu sareeya. Waan hubaa inaan laba jibaari karo ama aan saddex jibbaari karo dakhliga suuqgeyga saamaynta ku leh, laakiin si fudud kuma sameyn doono iyada oo aan luminayo ixtiraam la'aanta akhristayaasha. Waxa aan ku bixiyo astaan ​​isbarbar dhigeysa dadaalkii ay igu qaadatay in aan dhiso kalsoonideyda, qatarna galin maayo.
Xaaladda Suuqgeynta Saameeyayaasha: Waa Maxay Waligeed Nooc U Baahan Yahay In La Ogaado
Tags: suuqgeynta suuqgeyntasaamaynta suuq geynta saamayntainfographicxayeysiis mdgmdgadvertisinggobolka suuq geynta saamaynta
Adobe Creative Cloud: Akhriso Daabacada Wanaagsan ee Shatiyada!